ရေတံခွန် - ဝီကီပီးဒီးယား
ရေတံခွန် ဆိုသည်မှာ အလွန်မတ်စောက်သော ဒေသ သို့မဟုတ် တောင်စောင်းမှ ရေများ အလွန်လျှင်မြန်သော အရှိန်ဖြင့် စီးကျနေသော နေရာပင် ဖြစ်သည်။ ရေတံခွန်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် မြစ်များ သက်တမ်းနုစဉ် အချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်ကြသည်။  ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမြင့်ဆုံး ရေတံခွန်မှာ ဗင်နီဇွဲလား နိုင်ငံ ရှိ အိန်ဂျယ်လ်ရေတံခွန် ဖြစ်သည်။
၁.၁ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ထင်ရှားသော ရေတံခွန်များ
၂ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရေတံခွန်များ
ဗင်နီဇွဲလာနိုင်ငံ မှအိန်ဂျယ်လ်ရေတံခွန်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမြင့်ဆုံး ရေတံခွန် ဖြစ်ပြီး ၉၇၉ မီတာ (၃၂၁၃ပေ) မြင့်သည်။
နယူးယောက် အရှေ့တောင်ပိုင်းမှ ခဲနေသော ရေတံခွန်
မည်သည့် မြစ်ချောင်းတွင်မဆို ရေသည် မြင့်သည့်နေရာမှ နိမ့်သည့်နေရာသို့ ရုတ်တရက် ထိုးဆင်းလာလျှင် ရေတံခွန်ဖြစ် ပေါ်လာ၏။ မြစ်၊ သို့မဟုတ် ချောင်းရှိရေသည် ယင်း၏ အောက်ခြေကို တိုက်စား၍ စီးဆင်းရာတွင် ပို၍ပျော့သော ကျောက်ထပ်များကို တွေ့ရမည်ပင် ဖြစ်သည်။ အပေါ်ဘက်ရှိ ကျောက်လွှာသည် အောက်ဘက်ရှိ ကျောက်လွှာထက် ရေစီး ကြောင်း၏ တိုက်စားခြင်းကို ပို၍ လျင်မြန်စွာ ခံရမည်။ ထို အခါ ရေတံခွန် စ၍ ဖြစ်လာလေတော့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ရေစီးဆင်းသော ကျောက်မာအထပ်သည် မတ်စောက်သည့် ကမ်းပါးစောက်၏ အစွန်းဖြစ်နေတတ်၏။ ထိုအခါ စီးဆင်း သည့် ရေ၏ထုထည်မကြီးမားလှလျှင် ရေတံခွန်လျှော ဖြစ်ပေါ် လာ၍ စီးဆင်းသည့်ရေ၏ ထုထည်ကြီးမားလျှင် ရေတံခွန်ကြီး ဖြစ်လာလေသည်။ ကနေဒါနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကြားရှိ နိုင်အဂ္ဂရာရေတံခွန်ကြီးသည် ဒုတိယအကြောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ အာဖရိကတိုက် ပါရာနားမြစ် အနီးရှိ အစ်ဂွာဆုနှင့် လားဗရာဒေါ ကျွန်းဆွယ်မှ ဟယ်မီ လတန်မြစ်ရှိ ဂရန်းရေတံခွန်ကြီးများသည်လည်း ထင်ရှားသော ရေတံခွန်ကြီးများ ဖြစ်ကြလေသည်။ သို့သော် တောင်ထူထပ် ရာမှ ရုတ်တရက် နိမ့်ဆင်းသွားသော ရေစီးကြောင်းတွင်ရှိသည့် ရေမော် အစဉ်အဆက်များကိုသာ များသောအားဖြင့် ရေတံခွန် ကြီးဟု ခေါ်လေ့ရှိကြသည်။ ရေမော်ဆိုသည်မှာ သေးငယ်ပြီး လျှင် တဖြည်းဖြည်း စီးဆင်းသော ရေတံခွန်များကို ဆိုလို သည်။ ထိုကဲ့သို့သော ရေတံခွန်ကြီးများကို နိုင်းမြစ်နှင့် အော်ရင်နိုးကိုးမြစ်တို့တွင် တွေ့နိုင်သည်။ မြောက်အမေရိက တိုက်ရှိ အထင်ရှားဆုံးရေမော်အချို့ကို ဆူးဆန့်မာရီမြစ်အတွင်း ၌ တွေ့နိုင်လေသည်။ ထိုမြစ်သည် ဆူပီးရီးယားအိုင်၏ ထွက် ပေါက်တွင်ရှိသည်။ ထိုပြင် စိန်လော့ရင့်မြစ်ရှိ ရေမော်များသည် လည်း ကျော်ကြားကြလေသည်။
ရေတံခွန်ကလေးများ၊ သို့မဟုတ် ရေတံခွန်လျှောများသည် များသောအားဖြင့် အလွန်မြင့်ကြသည်။ ကာလီဖိုးနီးယား ပြည် နယ် ယိုဇင်မီတီး ရေတံခွန်လျှော အထက်ပိုင်းသည် ပေပေါင်း ၁၄၃ဝ မြင့်၍ နယူးဇီလန်ကျွန်း ဆတ်သာလင်ရေတံခွန်လျှော သည် ပေပေါင်း ၁၉ဝ၄ မြင့်လေသည်။ အဲ့လပတောင်တန်းရှိ စတော့ဗက် ရေတံခွန်လျှောသည် ပေပေါင်း ၉၈ဝ မြင့်သည်။ အချို့ရေတံခွန်များမှာ မမြင့်လှကြချေ။ သို့သော် ယင်းတို့၏ လှပမှုကြောင့် ထင်ရှားကြလေသည်။ ထိုရေတံခွန်များတွင် ကွီဗက်မြို့ အနီးရှိ မွန့်မိုရင်စီ၊ ဩရိဂန်ပြည်နယ် ကိုလမ္ဗီးယား မြစ်အတွင်းရှိ မာလတီနိုမာ ရေတံခွန်များလည်း ပါဝင်သည်။ ရော့ကီးနှင့် ဆဲလကတ်တောင်တန်းရှိ ရေတံခွန်အမြောက်အမြား နှင့် ယဲလိုးစတုန်း အမျိုးသားဥယျာဉ်အတွင်းရှိ အထက်နှင့် အောက်ရေတံခွန်လျှောများသည်လည်း လှပသော ရေတံခွန် လျှောများပင် ဖြစ်သည်။
ရေတံခွန်များသည် များသောအားဖြင့် တောင်ထူထပ်သော တိုင်းပြည်များတွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိကြသည်။ သို့သော် တစ်ခါ တစ်ရံတွင် မြစ်များ၊ သို့မဟုတ် ချောင်းများသည် ရေလွှမ်း လွင်ပြင်သို့ စီးဆင်းရာတွင်လည်း ဖြစ်ပေါ်တတ်သေးသည်။ မြစ်ချောင်း အမြောက်အမြား စုပေါင်းပြီးလျှင် ရေပြင်တစ်ခု တည်းအဖြစ် ထိုရေလွှမ်းလွင်ပြင်သို့ စီးဆင်းသောနေရာကို ရေတံခွန်ကုန်းတန်းဟု ခေါ်သည်။ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ အတွင်းသို့ စီးဝင်သော ချက်ဆာပိပင်လယ်အော်၏ တောင် ဘက်တွင် ထိုကဲ့သို့သော မြစ်များ၏ ရေတံခွန်ကုန်းတန်းရှိရာ ထိုကုန်းတန်း၌ ကုန်အမြောက်အမြား ထုတ်လုပ်သော မြို့ကြီး များ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်။ ထိုသို့ မြို့ကြီးများ ဖြစ်ပေါ်နေ ခြင်းမှာ ရေအားနှင့် နီးခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ရေအား နှင့် နီးခြင်းကြောင့် ရေအားသုံး လျှပ်စစ်စက်များပင် ထိုမြို့ကြီး များတွင် ရှိလာနိုင်လေသည်။ ထိုကဲ့သို့သော မြို့ကြီးများမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဗာဂျင်းနီးယား ပြ်ညနယ်ရှိ ရစ်ချမွန် မြို့၊ ကယ်ရိုလီးနားပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းရှိ ရိုလီမြို့၊ ဂျောဂျီး ယားပြည်နယ်ရှိ အိုဂတ်စတာမြို့နှင့် ကိုလံဗတ်မြို့များ ဖြစ်ကြ လေသည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ထင်ရှားသော ရေတံခွန်များပြင်ဆင်
အိန်ဂျယ် - ဗင်နီဇွီးလားနိုင်ငံ စုစုပေါင်း - ၃၂၁၂ ပေ
တူဂီလာ - တောင်အာဖရိကပြည်ထောင်စု - ၃၁၁ဝ ပေ
ယိုဇင်မီတီး - ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်(သုံးဆင့်) - ၂၈၂၅ပေ
ကူကင်နမ် - ဗင်နီဇွီးလားနိုင်ငံ - ၂ဝဝဝ ပေ
ရော်ရိုင်းမား - ဂူယားနိုင်ငံ - ၂ဝဝဝ ပေ
ဆတ်သာလင် - နယူးဇီလန်ကျွန်း(သုံးဆင့်)စုစုပေါင်း - ၁၉ဝ၄ ပေ
ဂါဗာနီ - ပြင်သစ်နိုင်ငံ - ၁၃၈၅ ပေ
ကရင်းမဲ - ဩစတြီးယားနိုင်ငံ - ၁၂၅ဝ ပေ
စတော့ဗက် - ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ - ၉၈ဝ ပေ
ထရမ်းမဲလဗက်- ။ - ၉၅ဝ ပေ
ဗက်တစ် - နော်ဝေနိုင်ငံ - ၈၅ဝ ပေ
ဂါဆိုးပါး - မိုက်ဆိုနယ်အနောက်မြောက်ပိုင်း- ၈၃ဝ ပေ
ယဲလိုးစတုန်း - ဝိုင်အိုးမင်ပြည်နယ် (နှစ်ဆင့်) စုစုပေါင်း - ၄၁၈ ပေ
ဝိတိုရိယ - ရိုဒီးဇီးယားနိုင်ငံ - ၃၅၄ ပေ
ဂရန်း - လားဗရာဒေါကျွန်းဆွယ်စုစုပေါင်း - ၃၁၆ ပေ
မွန့်မိုရင်စီ - ကွီဗက်ပြည်နယ် - ၂၆၅ ပေ
အစ်ဂွါဆု - ဗရာဇီးနိုင်ငံ - ၂၁ဝ ပေ
နိုင်အဂ္ဂရာ - နယူးယော့ပြည်နယ် - ၁၆၇ ပေ
စိုင်းတင် ရေတံခွန်‎ (ရခိုင်ပြည်နယ်)
ဆဒုံး ရေတံခွန်‎ (ကချင်ပြည်နယ်)
ဘုံတလာ ရေတံခွန်‎ (ချင်းပြည်နယ်)
ဓာတ်တော်ချိုင့် ရေတံခွန် (ပြင်ဦးလွင်)
(ပွဲကောက် ရေတံခွန်) ဘီအီးဖောလ် ရေတံခွန် (ပြင်ဦးလွင်)
↑ Carreck၊ Rosalind, ed. (1982)။ The Family Encyclopedia of Natural History။ The Hamlyn Publishing Group။ pp. 246–248။ ISBN 011202257 |isbn= တန်ဖိုး length စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရေတံခွန်&oldid=553945" မှ ရယူရန်
၂၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၉:၄၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၉:၄၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။